Ngaba ukuGunyaziswa kwabaDumileyo kukhetho oluqinisekileyo lokuThengisa? | Martech Zone
Ngaba ukuGunyaziswa kwabaDumileyo kukhetho oluqinisekileyo lokuThengisa?
NgoLwesithathu, Meyi 6, 2015 Douglas Karr
Ukwamkelwa koSaziwayo kusoloko kubonwa njengendlela efanelekileyo kwiinkampani zokuthengisa iimveliso zazo. Iinkampani ezininzi zikholelwa ekubeni iimveliso zazo zinxulunyaniswa nosaziwayo odumileyo ziya kunceda ukuqhuba ukuthengisa. Abathengi babonakala bengaqinisekanga ngefuthe labo nge-51% besithi ukuxhaswa ngabantu abadumileyo kwenza umahluko omkhulu kwizigqibo zabo zokuthenga.
Ngelixa i-ROI kwiindlela ezininzi zokuthengisa inokulinganiswa- I-ROI kwimvume yodumo kunokuba nzima ngakumbi ukulinganisa. Zininzi izibonelelo ezinokubakho ezinxulunyaniswa nodumo lwabantu abadumileyo kodwa zininzi izinto ezinokubakho ekufuneka zibekwe esweni ngononophelo.
Le migibe yenziwe xa uthembele kuphela kudumo olunye ukukhuthaza imveliso yakho. Idumela lenkampani yakho linokuba sezandleni zomntu omnye onomfanekiso onokutshintsha kubusuku obunye ngenxa yehlazo lodumo. Ngaba kufanelekile ukuqhuba lo mngcipheko?
Ngenxa yoku, impumelelo yokuvunywa kosaziwayo yahluka kakhulu kwaye eneneni yimeko yokusebenza kwabanye kwaye abanye akunjalo. Ukubaluleka kokukhetha usaziwayo ofanelekileyo kubaluleke kakhulu ekunciphiseni umngcipheko wolwazi olubi kwinkampani yakho. Kufanelekile ukugcina engqondweni ukuba umngcipheko onxulunyaniswa nodumo lwabantu abadumileyo awunakuze upheliswe ngokupheleleyo, kwaye ukusabela kwimpembelelo embi yesidumo sosaziwayo kuya kufuneka ukuba kujongwane nako ngononophelo.
Le infographic evela Sayina iRama eToronto ikunika iinkcukacha-manani zokuba isincomo sosaziwayo sinempembelelo kangakanani na, kunye namabali asemva kokuphumelela kosaziwayo nosaziwayo kuyo yonke le minyaka.
tags: beyonceimikhonto yebritneyCatherine zeta jonesudumo lwabantu abadumileyoudumo lomvuzo wokudumisaumngcipheko wokudumisa abantu abadumileyoUkuvunywa kosaziwayodavid beckhamuDonald trumpEllen degeneresiikardashiansUNicole Kidmannielsenoj simpsonrihannauphawuumqondisotoronto
Ungasisebenzisa njani iSicwangciso esiliQili seNtengiso
Ndinqwenela ukuba Abathengisi Bayiyeke Ukuthetha Oku…